Xinhua Myanmar - နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွင် ပြင်းအား ၈.၁ ငလျင်လှုပ်ခတ်ပြီးနောက် ဆူနာမီသတိပေးအဆင့်လျှော့ချ၊ ဘေးကင်းရာပြောင်းရွှေ့ရေးညွှန်ကြားချက်များ ဖြေလျှော့
ငလျင် နယူးဇီလန် ဆူနာမီ
နယူးဇီလန်နိုင်ငံ Whangarei မြို့ရှိ ကုန်းမြေမြင့်ပေါ်တွင် လူအများစုဝေးနေကြသည်ကို မတ် ၅ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ- Skykiwi/Handout via Xinhua) Europe
WELLINGTON, March5(Xinhua) -- The New Zealand government on Friday announced to lift evacuation orders and asked "all people who evacuated can now return" after three strong offshore quakes jolted the North Island one after another overnight.
Another massive 7.1-magnitude earthquake rattled at 2:27 a.m. local time, about 95 km east of Te Araroa, the far northeast point of the North Island of New Zealand, causing "severe" shaking and sparking tsunami warnings, reported GeoNet NZ.
The quake was defined as "terrifying" and "biggest one I've ever felt" by locals, causing severe shaking felt throughout much of the country.
Previous Article ကမ္ဘာ့စားသောက်ကုန်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာခြင်းက အင်အားလျော့နည်းလူအုပ်စုများအတွက် ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း ပညာရှင်များက သတိပေး
Next Article အမေရိကန်လွှတ်တော်အဓိကရုဏ်းမှုကို “ ၉/၁၁ - ပုံစံ ကော်မရှင်” ဖွဲ့၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးမည်ဟု လွှတ်တော်ဥက္ကဌပြော